ENUGWU: NDỊ OJI EGBE GBARA FADA EGBE N’ỤZỌ NOMEH – hoo!haa!!
ENUGWU: NDỊ OJI EGBE GBARA FADA EGBE N’ỤZỌ NOMEH
Enugwu: Ndi oji egbe madụ anọ kpuchiri ihu nọrọ n’oge o jiri ọkara gata elekere abụọ nke ehihie ụnyahụ bụ Tọọzdee, abalị iri n’asatọ nke ọnwa Julayị were gbaa ụkọchukwu ndị Katọliki egbe n’ụzọ si Nomeh dị n’okpuru ọchịchị Ọwụwa Anyanwụ Nkanụ aga Nenwe dị n’okpuru ọchịchị Aninri n’Enugwu Steeti.
Ụkọchukwu a bụ Fada Ikechukwu Ilo, onye nọ n’ụlọ ụka Katọliki Onye Nsọ Patrik, Nomeh ka ha gbara egbe n’ụkwụ nakwa n’ukwu ebe ha gbatara nwanyị ya na so Oriakụ Grace Chika Egbo bụ nne ụkọ nwanyị (Reverend Sister) egbe n’ubu.
Oriakụ Egbo, onye nọ n’ụlọ ọgwụ kwuru sị:”Ka anyị si Nomeh na-abata Nenwe, ndị a kpuchiri ihu gbawara egbe iji kwụsị anyị. Ka ha hụrụ na anyị ekweghị akwụsị ha gbawaziri anyị egbe aghara aghara wee gbata Fada n’ụkwụ nakwa n’úkwù ebe ha gbatara munwa egbe n’ụkwụ nakwa n’ubu”
Otu onye obodo ahụ bụ Chukwuemeka Onyema kọwara na ebugara ha abụọ n’ụlọ ọgwụ n’Emene ebe ha nọzị na-agbake.
“A hụrụ m ka e buru Fada na Nne Sista gbagawa ụlọ ọgwụ. Ụkọchukwu ahụ kwukwara na ya amaghị ndị ndị ahụ bụ maka na ha kpuchiri ihu, na ha nwere ike bụrụ ndị oji egbe ezu ma ọ bụ ndị ntọ”
Previous Post: ỌKA OKORO:EBEANỌ GA-ANỌ YA
Next Post: NKWUPỤTA AKỤNỤBA: MAKINDE KWESỊRỊ NṄOMI